Madaxweyne Dr Cabdiweli Gaas oo Dhagax-dhigay Wadada Ceel-daahir,Ceerigaabo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Dr Cabdiweli Gaas oo Dhagax-dhigay Wadada Ceel-daahir,Ceerigaabo[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 22-5-2015 deegaanka ceel-daahir ee Gobolka Barri ka dhagax dhigay wadada Ceel-daahir-Ceerigaabo oo ay dawladda iyo shacabka reer Puntland iska kaashanayaan dhismaheeda.
Xafladda dhagaxdhiga ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro, xildhibaano, gudiga wadada ceel-daahir-Ceerigaabo, waxgarad, cuqaal, dhalinyaro iyo masuuliyiin kale duwan oo diyaar garow xoogan ugu jiray soo dhaweynta madaxweynaha ee deegaankaasi.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay furitaanka mashruuca ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya si rasmi ah loo bilaabayo dhismaha wadadaan oo muhiim u ah dadka reer Puntland, laguna fulinayo hal kudhigii madaxweynaha ee ahaa Puntland ha isku tashato.
” Waxaan runtii aad ugu taamaynaa uguna dadaalaynaa in mashruuca aanu ku dhisayno wadadaan uu hirgalo , waan awoodnaa inaanu dhisno Puntland waa ay isku tashatay , waxa ay reer Puntland u kacaana waa ay fuliyaan ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in xukuumada uu hogaaminayo muhiimad gaar ah siinayso dhismaha kaabayaasha kala duwan ee dhaqaalaha Puntland si dalku uu u hormaro, meelkastana loo gaarsiiyo adeega dawladda si siman oo cadaalad ah .
” Puntland wixii ay iyadu qabsan karto iyadaa qabsanaysa , wixii awoodeedana kabaxsana Ilaahay iyo cidii kale ee ay la kaashan karto ama ha noqdeen maalgeliyayaal ajnabi ah amaba dawlado , geed dheer iyo mid gaabanba waxaan u fuulaynaa horumarka Puntland. ” Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.